Dab xooggan oo maanta qabsaday beeraha tuulada Karin oo ka tirsan gobolka Bari. – Radio Daljir
Dab xooggan oo maanta qabsaday beeraha tuulada Karin oo ka tirsan gobolka Bari.
Luulyo 30, 2012 1:26 g 0
Karin, July, 30 – Wararka idaacadda Daljir ay ka helayso tuulada Karin ee gobolka Barri ayaa ku waramaya in maantay saacaddu markay ahayd 12-kii duhurnimo uu dab ka dhex-qarxay beerihii ku dhex-yaalay tuulada Karin ee gobolka Bari.
Wararku, waxay tilmaamayaa qayb ahaan beerihii iyo baro kale oo mihiim ah in uu dalkaasi wax yeeleeyey kaasoo sida la sheegay ahaa dab xooggan, iyadoo dabaysha xagaaguna ay kaalmaysay sii holciddiisa.
Axmed Cabdi Goombe, oo ah guddoomiyaha tuulada Karin ee maamulka Puntland oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa sheegay in dadka tuulada ku dhaqan ay ku guul-daraysteen dabkaasi inay damiyaan, inkastoo uu tilmaamay in guddoomiyaha degmadu uu soo gaarsiiyay booyado iyo gurmad dabkaasi lagu-hakinayo.
Tuulada Karin, waxaa ku yaalla in ka badan 400 oo beerood kuwaasi oo ay ka baxaan dalagyo kale duwan, inkastoo si weyn aysan hanaqaad u ahayn beeruhu.
Inta badan xilliyada xagaaga ayaa sidaan oo kale dababku u bilawdaan, kuwaasi oo marka hore ka unkaba dabka la isticmaalo oo aan la damin, iyadoo mararka qaarna uu ka dhasho fududaysi dab la tuuray oo kan sigaarka la cabbana uu ka mid yahay iyo siyaabo kale oo dayac.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Tigay oo si kulul u cambaareeyay dilkii xalay ka dhacay Gaalkacyo,